एमिली ब्रोंटे। उनको २०० बर्षमा तीन प्रेम कविता | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, कविता
एमिली ब्रोंटेको उनको भाइ प्याट्रिक ब्राम्वेल ब्रोंटेको चित्र। गोन्डलका कविताहरूको पाण्डुलिपि।
आज, जुलाई ,०, हामी एक नयाँ जन्मदिन मनाउँछौं एमिली ब्रोंटे, एक अंग्रेजी का उपन्यासकार र कवि सब भन्दा प्रसिद्ध र शानदार साहित्यिक लाइनहरु स्याक्सन अक्षरहरूको। एक धेरै विशेष उत्सव किनभने तिनीहरू हो 200 वर्ष। यो सदाको लागि सम्झिने छ को लेखक त्यो भिक्टोरियन रोमान्टिक साहित्यको क्लासिक हो वाउटरिंग हाइट्स, उनको मात्र उपन्यास। तर उपन्यासकारको रूपमा उनको विशालताका कारण उनको काव्य पक्षलाई कम ज्ञात वा ओभर छायाको रूपमा हाइलाइट गर्नु आवश्यक छ। त्यसकारण, म यी उद्धार गर्दछु Tres माया कविताहरु तपाइँको स्मृतिलाई फेरि एक पटक प्रशंसा गर्न को लागी तपाइँ।
1 एमिली ब्रोंटे
1.2 मसँग हिंड्नुहोस्
1.4 मेरो महिला को चिहान
1.5 म कहिले सुत्न सक्दछु
जुलाई on० मा जन्म, 1818 en थोर्नटन, यार्कशायर, उनीहरुको दिदीहरु पछाडि छ चार्लोट (जेन आयर) र एनी (एग्नेस ग्रे), भिक्टोरियन रोमान्टिक साहित्यको मुख्य सन्दर्भ हो। उनको अस्तित्व, उनको दिदीहरूको जस्तै, एक द्वारा चिह्नित थियो गाह्रो बाल्यावस्था, संयुक्त राष्ट्र धेरै अन्तर्मुखी चरित्र, उनको आमा र ठूला बहिनीहरूको प्रारम्भिक घाटा, तपस्या एक एlic्गलिकन पास्टर बुबा र आफ्नो कान्छो भाइको समस्याग्रस्त जीवनको ब्रानवेल। बस जीवित 30 वर्ष र छोडियो सानो तर अपार साहित्यिक विरासत यसको गुणस्तर र त्यसपछिको प्रभावमा।
गोंडाल भन्ने काल्पनिक संसारबाट जन्मिएको जीवाणुको साथ, जुन उनले आफ्नी बहिनी एनीसँग कविताहरू साझा गरे प्रेम एमिली ब्रोंटे द्वारा तिनीहरू एक गहिरो बोध भावना र सार मिक्स रोमान्टिक कविता पछिल्लो मा मौलिक हुन्छन् कि धेरै सुविधाहरू संग विक्टोरियन कविता.
पनि, बिल र गहनता यसको चरित्र र पदहरू हुन् उदाहरणहरु पछि उनीसँग उपन्यासमा जाने कुरा के होला वाउटरिंग हाइट्स। विशेष रूपमा, हीटक्लिफ, क्याथरिन ईर्नशो वा एडगर लिन्टनका पात्रहरू केहिमा पहिले नै परिचित छन्। तर ती कविताहरू अघि थिए संयुक्त रूपमा प्रकाशित अन्तर्गत तीन बहिनीहरू द्वारा पुरुष छद्मनामहरू। यद्यपि तिनीहरू असफल भए, तिनीहरूले बीउ रोपे।
यी तीनवटा एमिलीले हस्ताक्षर गरे।
केवल तपाईंले अमर आत्मालाई आशिष्‌ दिनुभयो।
हामी विन्ट्री रातलाई माया गर्थ्यौं
बिना साक्षीहरू हिउँभरि घुम्दै।
के हामी ती पुराना सुखहरूमा फर्कनेछौं?
धेरै वर्ष पहिले जस्तै,
जबसम्म म जंगली क्षितिजमा मर्दिन
विशाल स्ट्याक्ड ब्लकहरूमा;
चाँदनी उज्यालोमा जाँदा
रुखो, रातको मुस्कान जस्तै।
आऊ, मसँग हिंड्;
धेरै पहिले हामी अवस्थित छौं
तर मृत्युले हाम्रो कम्पनी चोरेको छ
(जसै बिहान ओस चोर्छ)
एक एक गरी उसले शून्यलाई शून्यमा लिए
दुई जना मात्र बाँचे;
तर मेरा भावनाहरू अझै फ्ल्यास छन्
किनकि तिनीहरू तपाईंमा स्थिर छन्।
मेरो उपस्थिति दावी नगर्नुहोस्
के मानव प्रेम त्यो सत्य हुन सक्छ?
के मित्रताको फूल मर्न सक्छ?
र धेरै बर्ष पछि पुनरुत्थान?
हैन, यद्यपि आँसुले तिनीहरू नुहाइसकेका छन्,
चिहान टिभीले यसको काण्ड ढाक्छ,
जीवन सार फीका छ
र हरियो कहिल्यै फर्कनेछैन।
अन्तिम त्रास भन्दा सुरक्षित
भूमिगत कोठा जस्तै अपरिहार्य
जहाँ मरेकाहरू बस्दछन् र उनीहरूका कारणहरू,
समय, अथक, सबै हृदय अलग गर्दछ।
मेरो महिला को चिहान
चरा उब्रेको बिहान बस्छ,
Lrk मौन मा हावा ट्रेस,
माहुरीले हेदरको घण्टीको बीचमा नाच गर्छ
कि तिनीहरूले मेरो सुन्दर महिला लुकाए।
जंगली हिरण उसको छातीमा चिसो,
जंगली चराहरूले आफ्नो न्यानो पखेटा बढाए;
र उनी उदासिन सबैलाई हाँस्छिन्,
उनीहरूले उनलाई एक्लै छोडिदिए उनको एक्लै!
मैले सोचें कि जब उसको चिहानको अँध्यारो पर्खाल
यसको नाजुक र स्त्री रूप कायम राख्यो,
कसैले पनि खुशीको कटनी गर्दैन जसले काट्छ
खुशीको छोटो प्रकाश।
तिनीहरूले सोचे कि दु: खको लहर बितेर जानेछ
भविष्यका वर्षहरूमा कुनै ट्रेस छोड्दै;
तर अहिले सबै कष्टहरू कहाँ छन्?
र ती आँसुहरू कहाँ?
उनीहरू सासका सम्मानका लागि लड्न दिनुहोस्,
वा अँध्यारो र बलियो खुशीको लागि,
मृत्यु भूमि को निवासी
यो चंचल र उदासीन पनि छ।
र यदि तपाइँका आँखाहरू हेर्छन् र रुन्छन्
जबसम्म दु: खको स्रोत सुख्खा हुँदैन
उनी फर्किने छैन उनको शान्तिपूर्ण निद्राबाट -
न त यसले हाम्रो व्यर्थ सास फिर्ता दिनेछ।
उडा, पश्चिमी बतास, बाँझो टीको माथि:
गनगन, गर्मी को धाराहरु!
अन्य आवाजहरूको आवश्यक पर्दैन
उनको आराममा मेरो महिला रक्षा गर्न।
म कहिले सुत्न सक्दछु
ओह, मैले सुत्नुपर्ने घडीमा
म यो पहिचान बिना नै गर्नेछु,
र मलाई पानी पर्दैन कसरी मतलब छैन
वा हिउँले मेरो खुट्टा कभर भने।
स्वर्गले कुनै जंगली ईच्छाको वाचा गर्दैन
तिनीहरू पूरा हुन सक्छ, सायद आधा।
नरक र यसको धम्की,
यसको अक्षय अंगहरूसँग
उसले यो इच्छा सबमिट गर्ने छैन।
त्यसैले म भन्छु, उही कुरा दोहोर्याउँदै,
अझै, र म मर्दा सम्म म भन्नेछु:
यो सानो फ्रेम भित्र तीन भगवानहरू
तिनीहरू दिन रात युद्ध गर्छन्।
स्वर्गले ती सबै राख्दैन, यद्यपि
तिनीहरू मसँग टाँसिए;
र ती विस्मृत नभएसम्म मेरा हुनेछन्
मलाई बाँकी कभर गर्नुहोस्।
ओह, जब समयले मेरो छातीलाई सपना देख्छ,
सबै युद्ध समाप्त हुनेछ!
त्यो दिन आउनेछ जब म आराम गर्नु पर्छ।
र यो कष्टले अब मलाई सताउँदैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » एमिली ब्रोंटे। उनको २०० बर्षको लागि तीन प्रेम कविताहरू
कार्ला andreine भन्यो
नमस्कार के छ
कर्ला andreine लाई जवाफ दिनुहोस्
ओउ चेन भन्यो
मलाई कला यसको विभिन्न अभिव्यक्तिहरूमा मनपर्दछ किनकि म निश्चित छु कि उनीहरूले यसको लेखकको प्राण पाए।
Rocío Cadena लाई जवाफ दिनुहोस्